Onye ọzọ meriri agha megide Trump, TikTok ga-ewepụ ya na Stlọ ahịa | Site na Linux
Onye ọzọ meriri agha megide Trump, TikTok ga-ewepụ ya na AppStore
Na akwụkwọ ozi gara aga anyị kesara ntakịrị ozi gbasara ikpe TikTok, nke bụ isi boro ya ebubo na ị na-ebufe data onye ọrụ nkeonwe na sava na China, n'agbanyeghị na ụlọ ọrụ ahụ na-ekwe nkwa na ọ naghị echekwa data nkeonwe ebe ahụ.
Mgbe ahụ a gbara akwụkwọ ikpe na klas na California Federal Court, na-azọrọ na TikTok nakọtara nke ukwuu na nzuzo na-anakọtara ọtụtụ data nkeonwe sitere n'aka ndị ọrụ nwere ike ịmata ma zigara ya China. Mkpesa ahụ metụtakwara ByteDance, ụlọ ọrụ nne na nna ya.
Ọzọkwa, na mbido August, Onye isi ala United States, Donald Trump, nyere iwu ka a machibido iwu US azụmahịa na WeChat, ngwa izi ozi nke Tencent Holdings nwere, na ByteDance, onye nwe TikTok, n'ime ụbọchị iri anọ na ise, na-akọwa ụlọ ọrụ ndị China dịka ihe iyi egwu nchekwa obodo.
Ihe kpatara ya na-nyere na iwu mbuso egwu egwu WeChat Ha bụ ndị a:
“WeChat na-akpaghị aka naputa captures nke ukwuu nke ozi site na ya ọrụ. Nchịkọta data a na-eyi egwu inye ndị Kọmunist nke China ohere ịnweta ozi nkeonwe na nke ndị America. Ọzọkwa, ngwa ahụ na-ewepụta ozi nkeonwe na nke onye amaala nke ụmụ amaala China na-eleta United States, wee si otú a na-enye ndị otu Communist China otu usoro iji chịkwaa ụmụ amaala China ndị nwere ike ịnụ ụtọ uru nke ọha mmadụ nweere onwe ha maka oge mbụ na ndụ ha. «
Ngalaba Azụmaahịa US kwuru na usoro a ga-amalite na Sọnde, Septemba 20, 2020
Na nzaghachi iwu ndị isi nke President Trump bịanyere aka na August 6, 2020, Ngalaba Azụmaahịa taa kwupụtara mmachibido iwu azụmahịa metụtara WeChat na ngwa TikTok iji "kpuchido nchebe mba nke United States."
Na nkwukọrịta ya, mịnịstrị ahụ kwupụtara na “otu ndị China Communist Party (CCP) egosila na ha nwere ụzọ na ebumnuche iji tinye ngwa ndị a iji yie nchekwa obodo, amụma mba ofesi na akụnụba nke United States. Mmachibido iwu ndị a kwupụtara taa, mgbe ejikọtara, kpuchido ndị ọrụ na United States site na iwepu nnweta nke ngwa ndị ahụ ma belata ọrụ ha nke ukwuu.
Dị ka ozi ahụ si kwuo:
“Ọ bụ ezie na egwu egwu WeChat na TikTok abụghị otu, ha yiri. Onye ọ bụla na-anakọta ọtụtụ data onye ọrụ, gụnyere ọrụ ntanetị, data ọnọdụ, na nyocha na akụkọ nchọgharị. Onye ọ bụla bụ onye na-arụsi ọrụ ike na njikọ ndị agha obodo nke China ma nwee ike ịkwado nkwado nke ndị ọrụ CCP. Nchikota a na-ebute ojiji nke WeChat na TikTok na -emepụta ihe egwu anaghị anabata nchekwa obodo anyị. "
Site na Septemba 20, 2020, ndị a A machibidoro azụmahịa:
Onyinye ọrụ ọ bụla iji kesaa ma ọ bụ jigide ngwa ngwa WeChat ma ọ bụ TikTok, koodu mmebe ma ọ bụ mmelite ngwa site na ụlọ ahịa ngwa ngwa ịntanetị na United States (na ederede doro anya, ndị ahịa United States enweghị TikTok ma ọ bụ WeChat agakwaghị ekwe ka ibudata na a Storelọ ahịa ngwa ahịa US dịka nke Sọnde);
Onyinye oru ọ bụla site na ngwa WeChat maka ebumnuche nke ịnyefe ego ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ nhazi na United States.
Bido na Septemba 20, 2020, maka WeChat na Nọvemba 12, 2020, maka TikTok, A machibidoro azụmahịa ndị a:
Onyinye ọ bụla nke ọrụ nnabata Internetntanetị nke na-enye ohere ịrụ ọrụ ma ọ bụ njikarịcha nke ngwa mkpanaka na United States;
Onyinye ọ bụla nke ọrụ netwọk nnyefe ọdịnaya nke na-enyere ọrụ ma ọ bụ njikarịcha nke ngwa mkpanaka na United States;
Ndokwa ọ bụla haziri ma ọ bụ nkwekọrịta ozugbo site na ịntanetị ma ọ bụ ọrụ ntụgharị na-enye ọrụ ma ọ bụ njikarịcha nke ngwa mkpanaka na United States;
Ojiji ọ bụla nke koodu, ọrụ ma ọ bụ ọrụ mejupụtara ngwa mkpanaka na arụmọrụ nke ngwanrọ ma ọ bụ ọrụ mepụtara na / ma ọ bụ nweta na United States.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Onye ọzọ meriri agha megide Trump, TikTok ga-ewepụ ya na AppStore
Lee ihe ihere ha na-eme nke a na-akwa ákwá arịrị, mgbe ha chere na ha na-agbachitere ngwanrọ n'efu. Tiktok bụ nke kachasị njọ mgbe ọ bịara n'ịgba ohu nzuzo nke onwe. Ntinye aka nke ndetu a bụ ihe ihere n'ezie.
Zaghachi Axel Ayala
Nye ndị kwenyere na ihe Trump na-eme ziri ezi, m na-ekwughachi na ọ bụ adịghị mma. Ọfọn, iche na ụda ziri ezi (nke m na-echeghị), ụlọ ọrụ dịka Microsoft, Facebook, na Google kwesịrị imechi. Ha na-eme otu ihe ahụ ebubo ebubo TikTok. Agbanyeghị na anaghị m anabata data na-enweghị nkwenye nke ndị ọrụ, ana m akwado nnwere onwe ikwu okwu na nha anya n'ihu Iwu. Nke anaghị m ahụ US na-eme. Kama nke ahụ, ọ dị m ka ụda nwere ihu siri ike dị ka igwe site na nyocha ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ maka ihe anyị niile maara na ụlọ ọrụ US emeela kemgbe ọtụtụ afọ. Cheedị na ọ dị ka ebe ahụ sitere na The Simpsons mgbe Homer (ma ọ bụ Homer) were iwe na nna ya n'ihi na ọ kpọrọ ya ihe mberede, mana o mere otu ihe ahụ nwa ya nwoke bụ Bart. Nke a bụ otú enweghị ezi uche na ọnọdụ US na China bụ. Ndị United States na-enyocha onye ọ bụla, ma ọ bụrụ na ebubo Trump bụ eziokwu, ọ nweghị ọdịiche. Ikekwe ngọpụ nke na-akpagbu ndị na-eyi ọha egwu na-emebi Iwu nke Mba Ha (USA). Mana nke ahụ ga-emetụtakwa China ma ọ bụrụ na ọ bụ ya. Kpachara anya ka a ghara ịghọgbu gị. Ka anyị cheta na China bụ otu n'ime obodo enyela ego kachasị na sọftụwia efu, yabụ ka anyị laghachi akụkụ ihu ọma o meere anyị.
Zaghachi Marcelo Orlando
Ekwenyere m kpamkpam gị. Ma anyị niile maara na nledo abụghị ihe kpatara ụda chọrọ iji were TIktok ma ọ bụ ụlọ ọrụ China ọzọ.
Onlyda naanị na-eme ihe ndị isi niile kwesịrị ime: ịlụ ọgụ maka ọganihu nke obodo ya. Ha na-ahọpụta ya maka nke ahụ. Ha bụ mkpebi nke nchedo akụ na ụba. China machibidoro ngwà ọ na-ewere dị ka "ihe egwu". Russia machibidoro ha. Ma n'ezie USA na-emekwa. Onye ọ bụla nọ n’ụlọ na-eme ihe masịrị ya. Na ọkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị ihe dị iche doro anya. N'otu oge ị nwere ike ịsị na ụda na-eme ya ezighi ezi. Ndị FBI agaghị abịa mgbe ị nwụsịrị. Gbalịa kwuo na China banyere Xi Jinping ihe ị na-ekwu na United States gbasara Trump ma hụ ihe na-eme.
WMFS, WMX, Onye kere windo, WindowLab na Xmonad: WM ndị ọzọ maka Linux
Linux Site ọkọ (LFS): Project ike gị Linux Distros